Aqriso:-Duqeeyn lagu beegsaday xubin sare oo ka tirsan alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Aqriso:-Duqeeyn lagu beegsaday xubin sare oo ka tirsan alshabaab
Ahmed weheliye Gaashaan 24 October 2019 24 October 2019
Diyaarado dagaal ayaa waxaa ay duqeymo ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobalada Jubbooyinka iyo shabeeladda hooose.
Duqaynta ayaa si gaar ah waxaa loola bartilmaameedsaday saldhigyo Alshabaab ay ku lahaayeen degmooyinka Jamaame, Bu’aale iyo Jameeca.
Goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in duqeymaha ka dhacay degmooyinka Jamaame iyo Bu’aale lagu dilay dagaalamayaal iyo saraakiil ka tirsan Al-Shabaab.
Saraakiil ka tirsan milatariga Soomaaliya ayaa Warbaahinta u sheegay in duqeynta ka dhacday Bu’aale uu dhaawac ka soo gaaray sarkaal magaciisa lagu sheegay Xuseen Kabdhe.
Ma jiraan faahfaahin intaasi ka dheer oo laga heliyo duqeyntii ka dhacday degmooyinka Jamaame iyo Bu’aale oo ka tirsan Jubbooyinka.
Dhanka kale wararka laga helayo deegaanka Jameeca oo ka tirsan gobolka Shabeellada hoose ayaa sheegaya in diyaarado dagaal ay duqeymo la beegsadeen xarun ay ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab, inkastoo aan weli la xaqiijinin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqeyntaasi.
Diyaaradaha dagaal mareykanka ayaa kordhiyay duqeymaha ay ka fulinayaan deegaanada ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin gobolada dalka.
Somali commandos target Al Shabaab